घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू मारियानो डियाज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो मारियानो डियाज बायोग्राफीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो स्पेनी-डोमिनिकन पेशेवर फुटबलरको जीवन कहानी हो। हामी उनको बाल्यकाल देखि शुरू, जब उहाँ प्रसिद्ध भयो। तपाईंको आत्मकथा भूख बढाउन यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उनको बचपन छ - मारियानो डियाजको बायोको एक सारांश।
हेर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई मारियानो डियाज प्रारम्भिक जीवन र महान उदय प्रस्तुत गर्दछौं।
हो, सबैले मारियानोलाई त्यो रियल म्याड्रिड खेलाडीको रूपमा चिन्छ जुन शुरुमा थियो अलोकप्रिय तर त्यो सुन्दर मितिमा मान्यता प्राप्त भयो (मार्च २०२० को पहिलो), जुन दिन उनले FC बार्सिलोना बिरूद्ध २-०को जीतमा रियल म्याड्रिडको नेतृत्व दोहोरो पारे। हाम्रो संस्करण मारियानो डियाजको जीवनी जुन काफी रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मारियानो डियाजको बाल्यकाल कहानी:
यो अहिलेसम्म मारियानो डियाजको बाल्यकाल फोटोको प्रारम्भिक एक हो
सुरू गरेर, उनको उपनाम छ “जनावर“। मारियानो डेज मेज्या अगस्त १ 1 1993 August को पहिलो दिन उनको आमा, मारियाना मेजिया र बुबा, मारियानो डाजको जन्म भएको थियो।एक शरीर सौष्ठव) बार्सिलोना, स्पेनको उत्तर पूर्वमा। स्पेनिश फुटबलर आफ्नो जेठो दाइ र भित्र एक बहिनी संग हुर्केका थिए Premià de Mar, एक स्पेनिश शहर बार्सिलोना को लागि एक दुबै पर्यटन केन्द्र र एक छात्रावास घर को रूप मा मानिन्छ।
As ASwebsite यो राख्छ, मारियानो दाजका उनका छोराको जन्ममा उनका बाबुआमाले त्यो नाम वहन गरे "मारियोियान डियाज"र यो उनको परिवार मा नाम वहन गर्ने तेस्रो व्यक्ति बनाउँछ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… मारियानो डियाजका दुई आमा बुबाआमा- उनको बुवा र आफु लगायत हजुरको नाम छ।
सानो छँदा, जवान मारियानो आफ्ना हजुरबुबासँग धेरै समय बिताउँथे जो एक कडा क्याटालिन क्लबको साथ एक पूर्व फुटबलर हुन जान्छ। तिनीहरूको निकटताका कारण, फुटबलको खेल बिस्तारै उहाँसँग शुरू भयो।
मारियानो डियाजको आमाका अनुसार मारियानोले सानैदेखि फुटबल खेल्दा परिवारको घरको भित्तामा धेरै चोट लाग्यो किनकि यो बलको दागले दाग लाग्यो। उनले पनि भनिन् ब्रान्ड कि मारियानो पनि सोफहरु आफ्नो गोलपोष्टको रूपमा प्रयोग गर्‍यो। यस लेखको पछिल्लो भागमा फुटबलको साथ हामी मारियानो डियाजको प्रारम्भिक जीवनको थप विवरणहरू प्रदान गर्ने बित्तिकै बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्।
मारियानो डियाजको परिवार मूल र पृष्ठभूमि:
फुटबलरको अनुहारको हेराईको आधारमा, तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि मारियानो डियाजको परिवारको एक मिश्रित-जाति परिचय छ। सत्य हो, मारियानो डियाजका आमा-बुबामध्ये एक हो- उसको बुबा पूर्ण स्पेनिस हुनुहुन्छ। अर्को तर्फ, उहाँकी आमा डोमिनिकन रिपब्लिकका हुन्। मारियाना मेजाना सान जुआन डे ला मगुआनाको मूल निवासी हो (डोमिनिकन रिपब्लिकको पश्चिमी क्षेत्रमा एक शहर र नगरपालिका)। मारियानो डियाजका आमा बुबाको यो प्यारा तस्विर हेरेर तपाईं सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि मारिनोले पछि कसले प्रभावशाली गुण पाएका छन। उसको आमाले यो जित्यो !!!
मारियानो डियाजका अभिभावकलाई भेट्नुहोस् - उनका बुबा मारियानो डियाज र आमा, मारियाना मेजिया।
पारिवारिक पृष्ठभूमि: मारियानो डियाज एक उच्च मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ, एउटा जसमा उसको बुवाले धार्मिक हिसाबले संचालित गरे, जिम व्यवसायबाट आएको आयलाई धन्यवाद। त्यस पछि, १ 1990 XNUMX ० को दशकदेखि, मारियानो डियाजको परिवारले पैसा कमाउनको लागि स्प्यानिश फिटनेस उद्योगमा निर्भर रह्यो जसले तिनीहरूलाई निरन्तरता दियो।
मारियोियान डियाजs बचपन- फुटबलको साथ शुरुआती वर्षहरू:
सानै उमेरमा, मारियानो आफ्ना भाइसित जहाँ ऊ सकेसम्म फुटबल खेल्थे। आफ्नो हजुरबा र ठूलो भाइलाई धन्यवाद, जवान मारियानो धेरै युवा उमेरदेखि नै एक पेशेवर फुटबलर बन्ने बाटो सुरु गरे। स्पेनिश मिडिया (मार्का) मा मारियानो डियाजको परिवार स्पेनमा भेट्न जाँदा, उनको आमाले उनीहरूलाई उनको छोरोको फुटबलको प्रारम्भिक ब्रोमान्सको बारेमा निम्न कुरा बताइन्। उनको शब्दहरूमा;
“मारियानो सधैं आफ्नो भाइसँग घरमा खेल्थ्यो। पछाडि, भित्ताहरू बलको दागले दाग र सोफाहरू गोलको रूपमा प्रयोग गरियो।
म सँधै भन्छु कि उनीहरू नयाँ भएपछि म नयाँ सोफा खरीद गर्ने छैन। यो किनभने यदि मैले एक नयाँ किनेको छु भने तिनीहरूले यसलाई फेरि टुक्रा-टुक्रा पार्नेछन्। उसको साथीहरू पनि उस्तै हो जब ऊ पाँच वर्षको थियो। ”
खेलाडी हुर्काएकोमा मारियानोकी आमा।
मारियोियान डियाजs जीवनी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
२००२ साल थियो जब एक पेशेवर फुटबलर बन्ने यात्रा मारियानोको लागि शुरू भयो। त्यो वर्षको सफल परीक्षणले उनलाई एकेडेमी रोस्टरमा सामेल भएको देखे Reial क्लब Deportiu Espanyol, यस्तो पनि भनिन्छ RCD Espanyol एकेडेमी। एकेडेमीमा सम्मिलित भएपछि धेरैले मारियानोलाई अत्यन्त नम्र र आरक्षित केटाको रूपमा देखे।
यो मारियानोको RCD Espanyol एकेडेमी आईडी कार्ड थियो।
आरसीडी एस्पानियोलको अलेभन बीमा, मारियानोलाई ल्लूस प्लानागुमे रामोसले प्रशिक्षण दिए। त्यसबेला, जवान केटोले आफ्नो गतिको लागि लोकप्रियता प्राप्त गर्‍यो जुन उसको मुख्य सद्गुणको रूपमा देखा पर्‍यो। ठूलो गति साथ अनुसरण गरिएको थियो आफ्नो चिन्ह ओभरटेपिंग र आफ्नो फुटबल बलको साथ नीलो बाहिर चीजहरू गर्ने बानी। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनको सर्वश्रेष्ठ एकेडेमी सीजनमा मारियानो डियाजको goals१ गोलले उनलाई जित हासिल गरायो पिचिचि ट्राफी जुन स्पेनी फर्मका एक प्रतिनिधि द्वारा सम्मानित गरिएको थियो आईगुआ डेल मोन्टसेनी।
मारियानो डियाज बचपन फोटो- यहाँ उसलाई एक बाल फुटबलरको रूपमा पुरस्कार प्राप्त भइरहेको छ।
यो जवान चार बर्ष क्लबमा रहे जहाँ उनी थिएन महान लम्प बनाउन समाप्त गर्नुहोस्।
जीवनी तथ्य- प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
२००iano-२००2005 सत्रमा मारियानोसँग एस्पानिओल इन्फान्टिल बी टीमको लागि कहिले पनि सजिलो बाटो थिएन। यद्यपि उनीहरु मध्ये एक जो सबैभन्दा बढि उभिए, उनको प्रमुख मुद्दा "उचाइ“। त्यो उमेर समूहका युवाका लागि आवश्यक उचाइ पूरा नगर्नु भनेको उसको क्लबमा बस्नुलाई खतरा हो।
उसको खेलको समय कम खेल प्रति १ 15 मिनेट जति कम गर्न अवलोकन गर्दै, मारियानो डियाजका अभिभावकहरूले आफ्नो छोरालाई क्लबबाट जबरजस्ती गरेर कार्य गर्ने निर्णय गरे। उनीहरूले उनलाई थप प्रिमिà एकेडेमीमा भर्ना गरे जहाँ उनले २०० 2006 देखि २०० 2008 सम्म खेलेका थिए। एक बर्ष पछि उसको अर्को क्लब (सान्चेज लिलिब्रे) सँग, उक्त युवकको फोन आयो Badalona जहाँ उनले २०११ मा आफ्नो युवा जीवनको अन्त्य गरे।
मारियानो बडदालोनाको बखत वरिष्ठ टोली फेरि विस्फोट भयो। उहाँ मैदानमा धेरै छिटो र धेरै स्मार्ट को रूप मा वर्णन गरिएको थियो, एक सानो चाप जो आत्मविश्वास संग खेले। यो उपलब्धिले रियल मैड्रिडलाई आकर्षित गर्‍यो जसले प्रतिरोध गर्न सक्दैन तर २०११ मा उनलाई प्राप्त गर्न।
जीवनी तथ्य- प्रख्यात कथामा उठेको:
साना क्लबहरूबाट धेरै एकेडेमी स्नातकहरू जस्तै, रियल म्याड्रिडमा सहभागी हुनु भनेको युवा फुटबलमा फर्कनु हो। शानदार फोरवर्डले आफ्नो होमवर्क रियल म्याड्रिड एकेडेमीका लागि कुल goals० गोल गरेर म्यानेजर जिनेदिन जिदानले मुख्य टीममा बढुवा गर्नु भन्दा पहिले गरेका थिए। स्ट्राइकर करीम बेन्जेमामा पीठमा चोट लागेको छ। तर बेन्जेमा राम्रो हुने बित्तिकै, सम्भावित युवाका लागि सीमित भयो। कहिले पनि, निम्न ट्राफीहरू जित्नको लागि उनको योगदान सार्थक थियो।
यदि तपाईलाई थाँहा थिएन, यो जनावरले म्याड्रिडको साथ लगभग सबै चीज जित्यो।
रियल माद्रिदलाई उनीहरूको ट्रफी शासनकालमा सहयोग गरे पछि। मारियानो 30० जून २०१ 2017 मा, मारियानोले निर्णय गरे कि उनी बढी फुटबल अनुभवको लागि स्पेन छोड्नेछन्। उनले ओलम्पिक लिओनाइसका लागि हस्ताक्षर गरे जहाँ उनले लिग सत्रमा १ 18 गोल गरे जसको साथ एक उत्तम स्ट्राइक साझेदारीको साथ धन्यवाद मेम्फिस डिप्टी र निबिल फेक (१ and र क्रमशः १ goals गोल)। आफूलाई एक साँचो गोल मेसिनको रूपमा देखाउँदै, रियल म्याड्रिडले आफ्नो मानिसलाई फिर्ता लिनको लागि आफ्नो हात फैलाउने निर्णय गरे।
ओलम्पिक लियोनाइससँग मारियानो डियाजको उदय।
अगस्त २०१ 29 को २ th तारिखमा, मारियानो डियाज रियल म्याड्रिडमा फर्किए र क्रिश्चियन रोनाल्डोले खाली गरिएको नम्बर No शर्टले आशिष् पाए। म्याड्रिडमा मारियानोको दोस्रो जादू अहिलेसम्म सार्थक रहेको छ। उनको सब भन्दा उत्तम क्षणहरू इल्क्लासिकोको समयमा आए, मार्च २०२० को पहिलो दिन। बेन्चबाट छुटेको बेला, जनावरले Real ० औं मिनेटमा एफसी बार्सिलोनाको बिरुद्ध २-०को गोलमा रियल म्याड्रिडको अग्रता दुई गुणा बढायो।
उदाउँदो ताराले पहिलो मार्च २०२० एल क्लासीकोको एफसी बार्सिलोना बिरूद्ध २-०को जीतमा रियल म्याड्रिडको नेतृत्वलाई दोब्बर तुल्यायो।
मारियोियान डियाजs प्रेमिका, पत्नी र बच्चा:
उनको फुटबलमा प्रसिद्धिमा र आफ्नो नाम कमाउने क्रममा, यो निश्चित छ कि धेरै प्रशंसकहरू जान्न चाहन्छन् कि मारियानो डियाजजस्तो सफल मान्छेको एक प्रेमिका छ, वा यदि उसले वास्तवमै विवाह गरेको छ, जसको अर्थ पहिले नै पत्नी हुनु हो। सत्य यो हो, सफल फुटबलरको पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस प्रेमिका छ जो नामबाट जान्छ याइजा मोरेनो अन्तो.
याइजा मोरेनो एक मोडल र एक पौंडी पोशाक डिजाइनर हुन् जसले २०१२ देखि मारियानो डियाजको डेटि has गर्दैछिन्। उनको हेराईबाट हेर्दा, उनी वास्तवमै छिन् सौन्दर्य को एक प्याराग्ना, एक जो उनको तस्वीरमा हरेकमा विश्वासको आश्रय छ।
मारियानो डियाजको प्रेमिकालाई भेट्नुहोस्, याइजा मोरेनो- उनी राम्री छैनिन र?
मारियानो र याइजा सम्बन्ध eसार्वजनिक आँखाको छानबिनलाई scapes केवल किनभने यो नाटक मुक्त छ र यति मायाले भरिएको छ। सुन्दर याइजा वास्तवमा यो एक निःस्वार्थ व्यक्ति हो जसले उनको मान्छेलाई भावनात्मक सहयोग प्रदान बाहेक अरु केही गर्दैन, तपाईको आफ्नो जीवनलाई समात्नु हो।
मारियानो डियाजकी गर्लफ्रेंड याइजा मोरेनो उनको मान्छेलाई उसले गर्ने सबै कुरामा समर्थन गर्दछ।
मारियानो रियल म्याड्रिडमा फर्किएको समयमा, लाखौं फ्यानहरूले आफ्नो प्रस्तुतिको समयमा उनको तेजस्वी प्रेमिकाको पहिलो दृश्यावलोकन गरे। तलको फोटोबाट न्याय गर्दा, यो देखिन्छ याइजा छ मारियानो डियाजका अभिभावकहरू द्वारा अनुमोदन गरिएको छ। यसले तिनीहरूको विवाहको अघिल्लो चरण हुनसक्दछ।
मारियानो डियाजको प्रेमिका याइजा मोरेनो आफ्नो म्याड्रिड प्रस्तुतीकरणको बेला चित्रित छन्।
मारियानो डियाजको जीवन शैली:
मारियानो डियाजको जीवनशैली चिन्नुले तपाईंलाई उसको जीवनस्तरको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरु गरेर, ठूलो नेट मूल्य भएको, १€ लाखको बजार मूल्य र m m मिलियनको वार्षिक तलब कमाउने (लेखनको समयमा) निश्चित रूप मा उसलाई एक करोडपति फुटबलर बनाउँछ। कुनै श doubt्का बिना, मारियानो एक विलासी जीवन शैली जीउन सक्षम छ।
जीवनशैलीको कुरा गर्दा, मारियानो डियाज म्याड्रिडमा एक संगठित जीवन बिताउँछन्। यदि मौका दिइएमा उनी आफ्नो सम्पत्ति - ठूला घरहरू (हवेलीहरू), फैन्सी कपडाहरू, नाडी घडिहरु, निजी जेट्स, याट आदि देखाउन लाज मान्दैनन्। म्याड्रिडका सडकहरूमा तपाईले मारियानो औसत र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ड्रेसिंग गरेको देख्नुहुनेछ, किनकि उसको चम्किलो पुरानो स्कूल कार ड्राइभ गर्दै।
मारियानो डियाजको कार जस्तो देखिन्छ - सत्य हो, उसले पुरानो स्कूल दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छ।
फुटबलको बाहेक, मारियानो पनि उत्कृष्ट चालक हुन्। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एक पटक गोडी-कार्टि tournament्ग आयोजना गरिएको अडीमा उहाँ तेस्रो स्थानमा आउनुभयो। उसले तेस्रो ड्राइभरको पछाडि तेर्स्यो; Nacho र Ramos.
मारियानो डियाजको व्यक्तिगत जीवन:
मारियानो डियाज को पिचबाट बाहिर को छ?… उत्तर छ, एचe एक त्यस्तो व्यक्ति हो जुन प्रकृतिसँग धेरै सहज छ। यदि तपाईं माया गर्नुहुन्छ भने सुँगुर र शार्क, त्यसोभए तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। सत्य यो हो कि तपाई सायद यो जान्न उत्साहित हुनुहुनेछ कि मारियानो तपाई जस्तो छ- A डाइ-हार्ड सुअर र शार्क प्रेमी.
मारियानोलाई एक उपनाम भएको ठाउँमा भ्रमण गर्न मन पर्छ "प्रमोदवनमाबहामासमा, जहाँ उसले आफ्ना सब भन्दा राम्रा साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ (तल हेर्नुहोस्)। कसलाई थाँहा छ?… मारियानो पनि यी जनावरहरु मध्ये एक अपनाउन सक्छ।
मारियानो डियाजको व्यक्तिगत जीवनलाई खेलको पिचबाट जान्न।
अन्तमा, मारियानो डियाजको व्यक्तिगत जीवनमा, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ जसले आफ्नो मनपर्ने उद्धरणलाई समात्नुहुन्छ जुन निम्नानुसार हुन्छ;
"जहिले पनि तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो भनेर हेर्नुको सट्टा यो महत्वपूर्ण हुन्छ"।
मारियानो डियाजको पारिवारिक जीवन:
धेरै फुटबलरहरूका लागि स्टारडमको लागि बाटो सजिलो हुने थिएन किनकि यो परिवारका सदस्यहरूको मद्दत बिना नै छ। परिवारको कुरा गर्दा, यो मारियानो आफ्ना आमा बुबा मात्र एक्लै हुर्किएन, तर आफ्नो भाइ र सुन्दर बहिनी संग देखिन्छ। यस खण्डमा, हामी मारियानो डियाजका आमा बुबा र उनका राम्रा परिवारका बाँकी सदस्यहरूलाई बढी प्रकाश दिन्छौं।
मारियानो डियाज परिवारको सब भन्दा राम्रो हामी फेला पार्न सक्छौं। अब उसको बुवाको शरीर संरचना चेक आउट गर्नुहोस्।
मारियानो डियाजको बुबाको बारेमा अधिक:
माथिको फोटोमा उसको ठुलो देखिन्छु, तपाईं मसंग सहमत हुनुहुनेछ कि मारियानो डियाजका बुबा वास्तवमा शरीर सौष्ठव जस्तो देखिन्छ। सत्य कुरा के हो भने, उहाँ एक समय स्पेनिश च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो, भार उठानको क्रममा सम्मानका साथ।
उसको उमेरमा पनि, मारियानो डियाज स्नर अझै पनी आफ्नो जिम चलाउँदछन् प्रेमीà डेल मार्च, क्याटालुनिया तटमा रहेको क्षेत्र जहाँ उसको छोरो मारियानोको जन्म भएको थियो। आफ्नो क्यारियरमा बुबाको प्रभावको बारेमा बोल्दै, मारियानोले एक पटक भने;
“प्रायः म मेरो बुवासँग जिम जान्छु। उहाँलाई धन्यवाद, मैले स्ट्र्याच र चोटपटक रोकथाम अभ्यास गर्न सिके, जुन मेरो क्यारियरको लागि सबै राम्रो छ। ”
मारियानो डियाजको आमाको बारेमा अधिक:
महान् आमाहरूले सफल फुटबल छोराहरू उत्पादन गरेका छन् र मारियाना मेज्या एक अपवाद छैन। उनी सान जुआन डे ला मगुआनाका स्थानीय हुन्।डोमिनिकन रिपब्लिकको पश्चिमी क्षेत्रमा एक शहर र नगरपालिका) उनको जन्म र परिवार मूल को आधार मा।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… मारियानो डियाजका आमाबुवाहरू मध्ये, यो मारियाना मेजिया हुन् जसले आफ्नो छोरा र छोरीले छालाको र after्ग लिए पछि दुवैलाई जीन प्रभावशाली छ। तल चित्रण गरिएको, दुबै मारियाना र मारियानो एकदम नजिकको सम्बन्धको आनन्द लिन्छन्।
मारियानो डियाजकी आमालाई भेट्नुहोस्- मारियाना मेजा - दुबै देखिन्छ जस्तो देखिन्छ।
मारियानो डियाजको ग्रान्ड्याडको बारेमा अधिक:
मारियानो को सुपर ग्रान्ड्याड प्राथमिकता भनिन्छ मारियानो डायज Snr2। He परिवारको रक्त रेखामा गहिरो जाने फुटबलको लागि जिम्मेवार छ। उहाँविना मारियानो फुटबलर हुने थिएन। वास्तवमा, हार नमान्ने विशेषता उसको हजुरबा हजुरआमाबाट आउँदछ, जुन एक पटक फुटबल खेलाडी र शास्त्रीय थियो।
मारियानो डियाज भाइहरूको बारेमा अधिक:
मारियानो डियाजको आधा भाई छ जो एडुअर्ड मार्सेल नाएजबाट जान्छ (माथि चित्रित)। मारियानो जस्तै, ऊ पनि फुटबलर हो जसले सीई विलासार डे डाल्टका लागि खेल्छ। यो फुटबल क्लब हो क्याटालोनिया, स्पेनमा (बार्सिलोना प्रान्तमा) गाउँमा अवस्थित।
तपाइँलाई यो पनि थाहा दिन जान्न सक्नुहुन्छ कि मारियानोको सौतेनी भाई एडवर्ड मार्सेल नाइज पेड्रो एन्टोनियो नाइजको परिवारका अर्को सदस्यका कान्छो भाइ हुन्। पेड्रो, एक फुटबलर पनि डोमिनिकन रिपब्लिकको हाटो मेयर डेल रेमा जन्मेका थिए।
मारियानो डियाजको बहिनीको बारेमा बढि:
माथिको नम्र पारिवारिक तस्बिरको आधारमा, तपाईं हामीसँग सहमत हुनुहुनेछ जुन यो देखिन्छ कि मारियानोको एक बहिनी छ, जसलाई उनको अरू भाइबहिनीहरूले जस्तै उनको आमाको प्रभावशाली जीन पछ्याए।
मारियानो डियाजको अनटोल्ड तथ्यहरू:
वास्तवमा #1: प्रयास गरिएको डकैती:
मारियानो डियाज एक पटक एक प्रयास डकैतीको शिकार भएको थियो। यो घटना उसले माद्रिदको Calle Serrano सडक मा स्थित एक लक्जरी पसल भ्रमण पछि भएको थियो।रोनाल्डो वेबसाइट रिपोर्ट).
उसले भर्खरै किनेका सामानहरूको झोलाहरू सडकमा हिंड्दा, एक जना व्यक्ति उहाँ समक्ष गए र जबरजस्ती झोला चोर्न खोज्यो। मद्दतको लागि चिच्याएपछि, संदिग्ध त्यसपछि सडकको अर्को पार गएको थियो। दुई व्यक्तिहरू मारियानोबाट झोला चोर्ने संदिग्धलाई पछ्याए। अधिक शक्ति पाए पछि, उसले भुइँमा झोलाहरू फाल्ने काममा अन्त भयो। यसपछि मारियानोले यो उठायो र पुलिस हस्तक्षेप नगरी दृश्य छोडियो।
वास्तवमा #2: उनले आफ्नो आमाको देशको लागि खेल्न छोडे:
मारियानोले एक पटक आफ्नो आमा मार्फत डोमिनिकन रिपब्लिकका लागि खेल्ने योग्यता स्वीकार गरे। नतिजा स्वरूप, उसले २ international मार्च २०१ on मा हाईटी विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गरे, अन्तिम गोल sc-१ ले जित्यो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… सम्भवतः उसको अन्तिम राष्ट्रियता हो उसले आफ्नी आमाको देश छोड्ने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले। मारियानो नहुने क्रममा त्यो गरे क्याप-टाई र यो पनि, सम्भावित स्पेनको राष्ट्रिय टोली कल अपको दृष्टिकोणले। यस विकासले उनलाई आफ्नो आमाको देशबाट निम्तो अस्वीकार गरेको छ।
वास्तवमा #3: A जुलिया रॉबर्ट्स फ्यान:
हलिउड सेलिब्रेटीहरूको विश्वमा, रियल म्याड्रिडले केही अधिकार कमाएको छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… जुलिया रॉबर्ट्स क्लबको एक सेलिब्रेटी प्रशंसक हुन् जसले एक पटक मारियानोलाई भेटिसकेका छन्। उनको चित्र स्पेनीको राजधानीमा मारियानो डियाजसँग भेट भयो।
रियल म्याड्रिड स्टारले एक पटक जूलिया रॉबर्ट्सलाई भेटे।
वास्तवमा #4: उसको तलब ब्रेकडाउन:
रियल म्याड्रिडमा उहाँ फर्कनुभए पछि, प्रशंसकहरूले मारियानो डियाजका तथ्यहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न थालेका छन्, उनले स्पेनी विशालका साथ कति कमाए।
२ August अगस्ट २०१ 29 मा, मारियानोले रियल म्याड्रिडको साथ contract बर्षको सम्झौतामा मोहर लगाइदिए, जसले एक जनाले उसलाई वरिपरि तलबको तलबमा देखेको थियो। € 4million प्रति वर्ष। मारियानो डियाजको तलब सानो संख्यामा तोड्दै, हामीसँग निम्न छ।
पाउन्ड स्ट्रिtering (£) मा आय
अमेरिकी डलर ($) मा आय
प्रति वर्ष € 5,000,000 £ 4,294,250 $ 5,643,100.00
प्रति महिना € 416,666 £ 357,854 $ 470,258
प्रति हप्ता € 104,116 £ 89,463.5 $ 117,564
प्रति दिन € 14,881 £ 12,780.5 $ 16,795
प्रति घण्टा € 620 £ 532.5 $ 699
प्रति मिनेट € 10.3 £ 8.86 $ 11.6
प्रति सेकेन्ड € 0.17 £ 0.14 $ 0.19
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो मारियोियान डियाजबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्पेनमा औसत कामदारहरूले कम्तिमा २.2.3 बर्ष कमाउन काम गर्नु पर्छ € 333,333 जुन हाम्रो धेरै आफ्नै मारियानो डियाजले एक महिनामा कमाएको राशि हो।
वास्तवमा #5: मारियोियान डियाजट्याटूहरू:
मारियानो ट्याटू संस्कृतिमा विश्वास गर्दछ जुन आजको खेलकुद संसारमा धेरै लोकप्रिय छ। तल अवलोकन गरिए अनुसार लस ब्ल्यान्कोस फुटबलरसँग ट्याटू छ जुन उसको धर्म र उसले मन परेको कुराहरु चित्रण गर्दछ।
मारियानो डियाजको ट्याटू- फुटबलरको देब्रे हातमा थुप्रै ट्याटूहरू छन्।
वास्तवमा #6: मारियोियान डियाजको धर्म:
भर्जिन मरियमको रेखाचित्र माथिको मारियानो डियाजको ट्याटू रेखाचित्रको आधारमा, तपाईं मसँग सहमत हुनुहुनेछ कि उनका आमाबाबुले सम्भवतः उनको इसाई धार्मिक विश्वासको पालन गर्ने सम्बन्धमा हुर्काउनुभएको हुनसक्छ। क्याथोलिकवाद.
मारियानो डियाजको विकी:
अन्तमा, मारियानो डियाजको जीवनीमा, हामी तपाईंलाई उसको विकी नोलेजबेस प्रदान गर्दछौं। तलको तालिकाले तपाईंलाई उसको बारेमा संक्षिप्त र सजिलो तरिकामा जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
मारियानो डियाज जीवनी तथ्य (विकी ईन्क्वायरीज)
पुरा नाम: मारियानो डेज मेजा।
जन्म मिति र स्थान: १ अगस्त १ 1 1993 ((उमेर २ years बर्ष), प्रिमिय डी मार, स्पेन।
अभिभावक: मारियानो डियाज स्नार (पिता) र मारियाना मेजिया (आमा)।
भाई बहिनीहरू एड्वार्ड मार्सेल Núñez (सौतेनी भाई) र एक बहिनी
पारिवारिक मूल: स्पेन (बुबाको पक्ष) र डोमिनिकन रिपब्लिक (आमाको पक्ष)
उचाइ: 1.80 मीटर (5 फुट 11 मा)
व्यवसाय: फुटबलर (स्ट्राइकर)
सम्मान (मार्च २०२० को रूपमा) ला लीगा: २०१––१–,
सुपरकोपा डे एस्पाना: २०१–-२०,
यूईएफए च्याम्पियन्स लिग: २०१––१–,
फिफा क्लब विश्व कप: २०१।।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मारियानो डियाज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।